NextMping | Remangwana ReBlog Blog
Tsvaga ne zuva Sarudza Zuva June 7, 2021 Dai 12, 2021 April 13, 2021 March 24, 2021 February 17, 2021 December 14, 2020 November 18, 2020 October 22, 2020 October 8, 2020 August 27, 2020 August 18, 2020 July 7, 2020 Dai 22, 2020 April 21, 2020 April 13, 2020 March 31, 2020 March 25, 2020 March 16, 2020 March 13, 2020 February 11, 2020 February 4, 2020 January 2, 2020 December 19, 2019 November 25, 2019 November 19, 2019 November 14, 2019 November 4, 2019 October 24, 2019 October 6, 2019 September 18, 2019 September 5, 2019 August 29, 2019 August 17, 2019 July 23, 2019 July 4, 2019 July 2, 2019 June 21, 2019 June 14, 2019 Dai 27, 2019 Dai 6, 2019 April 23, 2019 April 11, 2019 March 25, 2019 March 12, 2019 March 11, 2019 February 28, 2019 February 14, 2019 February 5, 2019 January 29, 2019 January 15, 2019 January 3, 2019 December 5, 2018 December 3, 2018 November 20, 2018 November 6, 2018 October 30, 2018 October 14, 2018 September 29, 2018 September 19, 2018 September 12, 2018 September 5, 2018 August 27, 2018 August 17, 2018 August 1, 2018 July 26, 2018 July 23, 2018 July 11, 2018 July 9, 2018 June 28, 2018 Dai 21, 2018 April 26, 2018 April 11, 2018 March 20, 2018 February 28, 2018 February 20, 2018 January 31, 2018 January 9, 2018 January 3, 2018 December 11, 2017 December 4, 2017 November 11, 2017 October 23, 2017 October 16, 2017 September 12, 2017 September 7, 2017 August 25, 2017 July 26, 2017 July 19, 2017 June 15, 2017 June 7, 2017 Dai 23, 2017 Dai 4, 2017 Dai 2, 2017 April 18, 2017 April 5, 2017 March 21, 2017 March 10, 2017 March 1, 2017 February 20, 2017 February 7, 2017 January 17, 2017 January 6, 2017 December 14, 2016 December 9, 2016 November 21, 2016 November 16, 2016 October 28, 2016 October 12, 2016 October 3, 2016 September 23, 2016 September 14, 2016 August 22, 2016 August 12, 2016 July 19, 2016 June 28, 2016 June 22, 2016 June 13, 2016 Dai 17, 2016 Dai 12, 2016 Dai 2, 2016 April 25, 2016 April 7, 2016 March 29, 2016 March 14, 2016 March 12, 2016 February 10, 2016 January 19, 2016 January 17, 2016 December 29, 2015 December 13, 2015 December 8, 2015 November 27, 2015 November 23, 2015 November 19, 2015 November 9, 2015 October 14, 2015 September 16, 2015 August 28, 2015 August 14, 2015 August 6, 2015 July 27, 2015 July 15, 2015 June 10, 2015 Dai 11, 2015 April 1, 2015 March 23, 2015 March 11, 2015 February 8, 2015 February 3, 2015 January 18, 2015 December 23, 2014 December 8, 2014 October 29, 2014 October 24, 2014 October 8, 2014 October 3, 2014 September 9, 2014 September 4, 2014 August 29, 2014 August 28, 2014 August 27, 2014 June 25, 2014 June 12, 2014 Dai 25, 2014 Dai 16, 2014 Dai 15, 2014 Dai 13, 2014 Dai 8, 2014 April 24, 2014 April 17, 2014 April 14, 2014 April 11, 2014 March 28, 2014 March 19, 2014 February 27, 2014 February 20, 2014 February 4, 2014 February 3, 2014 January 16, 2014 December 6, 2013 November 14, 2013 November 8, 2013 September 19, 2013 September 16, 2013 September 5, 2013 August 22, 2013 August 18, 2013 July 20, 2013 Dai 20, 2013 April 20, 2013 March 20, 2013 February 20, 2013 January 20, 2013 December 23, 2012 December 20, 2012 November 23, 2012 November 20, 2012 October 20, 2012 September 20, 2012 August 20, 2012 July 23, 2012 July 20, 2012 June 20, 2012 Dai 20, 2012 April 20, 2012 March 20, 2012 March 3, 2012 February 23, 2012 February 20, 2012 January 28, 2012 January 23, 2012 January 21, 2012 January 20, 2012 January 19, 2012 December 22, 2011 December 20, 2011 November 20, 2011 October 20, 2011 September 20, 2011 August 20, 2011 July 20, 2011 June 20, 2011 Dai 20, 2011 March 20, 2011
Tsvaga ne chikamu Select Category1 Nzvimbo Yebasa3 GenerationschinyorwaZvakanakisisa ZveMablogiBlogBusinessCEO Solutionschinja hutungamirichange managementChinja manejimendi eGeneralBhizinesi YekuzivaHutungamiri hwekushanduka-shandukaRamangwana reBasaGen Y Inotenderera NyikaChizvarwa XGeneration YMaGeneral uye TekinorojiZvizvarwa zviri muBasaKuvandudza uye kuumba zvinhu muBasaKuvandudzwa muBasaKubatanidza Tekinoroji Nekutaurirana Kusasirira Kunaka KwevanhuHutungamiri HwirudziroMaitiro EhutungamiriMatipi eutungamiriKutungamira Kunoshandako KubasaKutungamira Multigenerational Nzvimbo YebasaKutungamira maGeneralMediashanduko yesanganoMaitiro AnoonekwaIyo 2020 Nzvimbo yekushandaTrendingUncategorizedSimudzira Hutungamiri Hwako OS
Inotungamira Matimu eHybrid
Rimwe rematambudziko makuru vatungamiriri vakave naro kubva pakukanganiswa kwedenda iri 'kutungamira zvikwata zvakasanganiswa'. Kuva mutungamiri pre-denda kwaive kuchiri kwechinyakare mukuti vatungamiriri vaive nevashandi vaishanda zvakanyanya muhofisi. Pakaitika chirwere ichi chakamhanyisa ramangwana rechokwadi chebasa re 'basa riri kure'. Pamberi kwedenda makambani mazhinji akati […]
Vatungamiriri Vanoda Zvakakosha Hunyanzvi hweVanhu Kuchengeta Matimu Achibatanidzwa
Takaongorora vashandi vanosvika chiuru tikavabvunza kuti "Unyanzvi hupi hwaunofunga kuti vatungamiriri vako vanofanirwa kuva nahwo kuti urambe uchibatirana?" Vanopfuura makumi mapfumbamwe nemana kubva muzana yeavo vakaongororwa vakati vanofunga kuti vatungamiriri vanoda hunyanzvi hwevanhu hwakakosha (hunozivikanwawo sehunyoro hunyoro) kuitira kuti zvikwata zvibatanidzwe. Kare, izwi raimboshandiswa ku […]
Generation Covid neramangwana …… Kune chizvarwa chitsva mudhorobha - Generation Covid yaro inozivikanwawo seGen C. inosanganisira vechidiki vari pasi pemakore makumi maviri. Unogona kunge uchiziva zvimwe zvizvarwa: Gen Z 1997 kusvika 2020 (ziva zvekuve vezvenhau chizvarwa) Millenials 1981 kusvika 1996 (inozivikanwa […]
5 Dzidziso dzeHutungamiri Dzinodzidziswa Kubva Kudenda
Mumwedzi mishoma yapfuura takaita ongororo yevatungamiriri kubva kumaindasitiri mazhinji nezvezvidzidzo zvavo zvehutungamiriri zvakadzidzwa kubva kudenda. Zvatakanzwa kubva kuvatungamiriri ndezvekuti kwave nekudzidza kwakawanda kubva muna2020 kusvika muna2021. Vamwe vatungamiriri havana kuda kumbofunga nezvezvidzidzo zvadzidzwa nekuda kwe […]
Maitiro Akanyanya Kunze Kwevashandi Vari Kure
Takaita ongororo dzakawanda dzevashandi vari kure uye takanyora maitiro akanakisa evashandi vari kure. Munzira dzakawanda pakanga paine kubvumirana kwese kuti kana 2020 yapera paizove nepfungwa yekudzokera ku'zvakanaka '. Chero zvakajairika zviri nemiyero yanhasi zviri pachena kuti pane hutsva […]
21 InoteveraMepu Kwebasa Maitiro e2021
Gore rino isu tinogovana yedu 21 InoteveraMepu Kwebasa Maitiro e2021 kuburikidza neslideshare. Covid19 na2020 zvinokanganisa mashandiro atinoita uye nemabatiro atinoita kurarama. Isu tiri chete pakutanga kwekuchinja kwenzanga kwatichaona semhedzisiro yedenda repasi rose.
Hezvino Izvo Zvekutarisa Mberi Ku2021
Hezvino izvo zvekutarisira mune 2021. Muna 2020 nyika yakachinja zvakanyanya - mashandiro atinoita - mararamiro atinoita uye nemabatiro atinoita kumberi. Muna 2020 isu tese tinogona kubvumirana kuti tese tiri kusangana nepi nhanho yekushushikana. Kuva munhu kusangana nekushushikana. The […]
Basa Redu Mune Denda Rakatapudza Ropa reVanoda Ropa
2020 yakurova iwe mune iwe unoziva chii? Uku ndiko kutora kwangu kuti ini / isu tinogona sei kutarisa pahunhu hwedu hwakajairika panguva yedenda. Ini handizive nezvako asi 2020 yanga iri kick hombe pachigaro chebhurugwa. Zvinoita sekunge kushushikana kwedenda kwakapfeka akawanda […]
Iyo Yemberi Yekushandira Kubasa Iri Hybrid YeVari Kure uye MuHofisi Vashandi
Isu takanzwa hurukuro zhinji nezve iyo 'nyowani yakajairika' kubvira kutanga kwedenda. Muzvokwadi hapana munhu anonyatso kuziva kuti izvo zvitsva zvakajairika zvinoita sei. Parizvino tiri kuenda kuburikidza neshanduko yemagariro. Denda iri riri kukonzeresa vashandi kuti vaongorore zvakare kuti basa rinorevei kwavari semunhu mumwe nemumwe. Vashandirwi vakagadzirisa […]
Inishuwarenzi Nyaya Kufunda: 5 Nzira dzeKushanda Uri kure
Inishuwarenzi Yenyaya Yekudzidza: 5 Nzira dzeKushanda uri Kure Guest positi naCrystal Metz - Crystal zvakare yakasimbiswa NextMapping Entrepreneur Mudzidzisi anoshanda nevamabhizimusi kuronga zvinobudirira izvo zvinotevera kuti ubudirire zvakanyanya. Kushanda uri kure, kana kumhanyisa bhizinesi rako, kutarisira vashandi nekuchengetedza vatengi vachifara kubva kumba, zvinogona kunge zvakanyanyisa kutaura […]
5 Hutungamiri Hacks Kune Akanyanya Kuzivikanwa WFH (Shanda Kubva Kumba) Matambudziko
Mune ino blog positi ini ndinogovana mashanu ehutungamiriri hacks kune akajairika WFH (basa kubva kumba) matambudziko. Pane ichangopfuura Zoom kufona na CEO takakurukura zvinhu zvinomuchengeta iye nevatungamiriri vake husiku panguva yedenda. Zvinetso izvo ivo nevatungamiriri vayo vaibata nazvo zvaive zvakangofanana […]
8 Nzira dzeVatungamiriri Vanogona Kutsigira Vashandi Vake Kuti Vakure Mune Nguva Dzisina Kujeka
Kune nzira sere vatungamiriri vanokwanisa kutsigira vashandi vavo kuti vabudirire munguva dzekusagadzikana kwakanyanya. Munguva pfupi yapfuura mutengi akagovana kuti anga achinetseka nekuchengetedza nhengo dzeboka rake kuita. Akaudzawo kuti vashandi vake vakapokana nekuramba vakatarisa pamwe nekugadzira. Iko hakuna bhuku rekutamba rekubudirira kubata neese […]
Ramangwana Rebasa uye Simba reBrand
Munguva pfupi yapfuura ndanga ndiri muenzi paZync agents podcast nhepfenyuro ndichitaura nezveramangwana rebasa uye nesimba rechiratidzo.
Vatungamiriri Vari Kukwira Sei Kutungamira Mukukanganisa-Covid-19
Nezuro ndakabvunzwa kuti sei vatungamiriri vari kusimuka kuti vatungamire mukuvhiringidzwa kweCovid-19.
Pakati peCoronavirus - Uri Kunzwa Sei Nezve Remangwana?
Takatumira mubvunzo kubvunzurudza kuruzhinji uchibvunza - "pakati pecoronavirus urikunzwa sei nezveramangwana? Iyo data ichiri kuuya mukati uye kana iwe wapedza kuongorora iwe uchaona mhedzisiro. Pazasi tiri kugovera mhinduro dzekutanga. Mibvunzo yatakabvunza yaisanganisira: Uri kunzwa tariro nezve […]
Coronavirus Inomhanyisa Ramangwana Rebasa
Vese vemberi vanotaura nezvekuvhiringidzika uye kuva vakagadzirira kukanganisa - kumwe kukanganisa kwatinoziva zvechokwadi ndekwekuti Coronavirus iri kukurumidza ramangwana rebasa. Sezvo vanhu vanojairana nekushanda vari kure, matambudziko matsva abuda uye mikana mitsva yezvehupfumi ichamuka Mafashama eruzivo pane coronavirus anotyisa uye zuva nezuva […]
Nyowani Pamhepo Kosi - Maitiro Ekugadzira & Kugadzira paKukurumidza kweKuchinja
Isu tiri kunyatsofara kuwedzera kosi nyowani yepamhepo kosi - "Maitiro Ekugadzira & Kugadzira paKumhanya kweKuchinja" MunaFebruary takawedzera, "Iyo Ramangwana reKutsvaga uye Kuchengetedza Yepamusoro Tarenda" online kosi. Kosi yedu nyowani, "Maitiro Ekugadzira uye Kugadziridza Panguva Yekuchinja" inoitirwa kubatsira vatungamiriri, nhengo dzechikwata, […]
Kukwira Kwe Remote Work mu2020 - Maitiro Ekuti ibudirire Mukambani Yako
Sezvandinonyora izvi tiri pakati pechirwere checoronavirus. Tiri mukukwira kwebasa riri kure muna 2020. Zvikoro zvakavharwa, maresitorendi ari kuvhara kana akachinja masevhisi kutora kunze chete, vatengesi vakaita seApple vakavhara zvitoro uye maindasitiri ese akakanganiswa nekukanganisa kukuru uku. Makore mashanu […]
Shandisa iyo PREDICT Model Kuti Utorere Kunetseka Nezveramangwana
Isu tiri mukati mekukura kwedenda reCovid-19 uye munhu wese ari kunetsekana, munhu wese ari kunzwa kusapofumadzwa nekukanganisa kwehupfumi hwenyika. Tinogona kushandisa maturusi akadai sePREDICT modhi kubatsira kudzikamisa kunetseka nezveramangwana. Indasitiri yega yega iri kukanganiswa kusanganisira indasitiri yekufambisa, indasitiri yemisangano, pamwe nekutenga […]
Jason Campbell weMindValley anobvunzurudza Cheryl Cran pane iyo 'yekuzvitungamira-inodiwa' inodiwa kugadzira ramangwana rakagovaniswa. Kuteerera kune yakazara odhiyo yeiyi bvunzurudzo enda pano. Jason: Ndine Cheryl Cran pano, iyo, Ah zvangu, tichava nerubatsiro rwakadaro tichitaura nezveramangwana rebasa uye kuti iro ramangwana […]
Ramangwana Revatengi Zvakaitika
Ndeipi ramangwana rezviitiko zvevatengi? Makore mashoma apfuura ini ndakashanda nekambani ye tech yaive ichiisa pamisangano yekutenda yevatengi. Tarisiro yemisangano yaive yekupa iyo tech firms vatengi maturusi matsva uye zviwanikwa kuti vawedzere yavo tech. Ini ndakabvunzwa kunongedzera kwezviitiko izvi pane […]
2020 Mwaka weKwekwe
Ndiwo kutanga kwegumi nyowani uye 2020 igore rekuzvinatsiridza pachedu. Yasvika nguva yekuti mumwe nemumwe wedu awedzere kuzvipira kwake pakuva vanhu vari nani, vatambi vechikwata vari nani, uye vatungamiriri vari nani. Unogona here kunzwa iko kukurumidza kwazviri? Iwe unonzwa here kukwevera kweramangwana uchitikumbira isu ku […]
Kupemberera 2019 paNeMMephu
Tiri kupemberera pano paNextMapping sezvo 2019 ichiswedera. Muna 2019 bhuku rangu, "NextMapping - Fungidzira, Enda uye Gadzira Remangwana ReBasa" UYE yakagadzira iyo yechipiri edition nebhuku rebasa rako iro richaburitswa muna Kukadzi 2. Vatengi vedu vekutsvaga vakawedzera kubudirira kwavo mu2020 nekugamuchira hutungamiri hwakagovaniswa. Mu […]
Dhijitari, Shanduko uye iyo PREDICT Model Chris Rainey Anobvunzana Cheryl Cran
Nhasi ndave nemufaro wekubvunzurudzwa naChris Rainey muvambi weHRleaders.com nezveramangwana rebasa, dhijitari, shanduko uye PREDICT modhi kubva mubhuku rangu, "NextMapping - Tarisira, Navigate uye Gadzira Ramangwana reBasa". Bvunzurudzo iyi yanga yakanangana nekwakachinja-chinja ramangwana uye kuti vatungamiriri vanogona sei kuwedzera muenzaniso wePREDICT ku […]
Ungaita Sei Kuti Vashandi Vabatane
PaNextMapping takaongorora zviuru zvevatungamiriri uye imwe yenyaya dzepamusoro dzakatarisana nevatungamiriri ndeye "maitiro ekuita kuti vashandi vabatanidzwe". Munguva pfupi yapfuura, ndakaitisa nhevedzano yemasangano eBMO Bank yeMontreal kuCanada. Takaenda kuWinnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Montreal, uye Toronto. Iko kukoshesa kwaive pane ramangwana rebasa […]
Imwe yeTrends YeMangwana Yekushanda 2020
Nguva pfupi yadarika isu takaburitsa gwaro redu rakavandudzwa pamusoro peTop 20 Maitiro Emangwana reBasa 2020. Chinyorwa ichi chinotarisa pane chimwe chezviitiko zveramangwana rebasa 2020. Imwe yemaitiro atakatsvaga inosanganisira kutarisisa shanduko yedhijitari kuburikidza nelenzi yevanhu. chekutanga'. Vatungamiriri vazhinji vatakaongorora vakataura […]
Maitiro Ekumisa Kukakavara Mukati Webasa
Isu takaongorora zviuru zvevatungamiriri uye rimwe rematambudziko epamusoro rakaburitswa ndere: Maitiro ekumisa kusahadzika munzvimbo yebasa. InoteveraMepu yekuongorora Iyo dizzying yekumhanyisa shanduko muhunyanzvi uye bhizinesi zvinoita kuti zviome kuchengetedza vashandi vachiita mukugadzira iro ramangwana. Vashandi vanoshorwa neshanduko irikuenderera uye havavimbe nevatungamiriri vavo […]
Hapasisinazve “Unyanzvi Hwakapfava”?
Izwi rekuti “hunyanzvi” rinoreva kushaya simba kana kusakosha uye saka ndinoti, 'Hapasisina hunyanzvi!'. Ndiri pabasa! Ndave ndiri pabasa iri kweanopfuura makore gumi! Ndiri kutarisira kuti iwe uchabatana neni. Chinangwa ndechekuti izwi rekuti "hunyanzvi hushandurwe neizwi nyowani senge" yakakosha […]
Fembera Nguva Yemberi Nemhando Dzemafambiro
Iko hakuna bhora rekristaro asi pane chakavanzika icho vanoziva vanoziva - iwe unogona kufanotaura ramangwana nekumisikidza mapatani. NdiAbraham Lincoln uyo akati, "nzira yakanakisa yekufungidzira ramangwana kuigadzira". PaNextMapping isu tinokubatsira iwe kufanotaura ramangwana nekumisikidza mapatani. Mubhuku rangu, "NextMapping - Fungidzira, […]
Uku Shanduko Huru Kuchagadzira Ramangwana Rebasa
Ndiri kunyora izvi kubva kuMinneapolis airport kwandakapedza akateedzana ezvinyorwa zvemakasitoma muindasitiri yekutamisa vashandi, vatengi muindasitiri yezvidziviriro nevatengi muhurumende yemubatanidzwa. Kunyangwe rimwe nerimwe remabhizimusi aya ringaite senge rakaparadzaniswa uye rakafanana chokwadi ndechekuti yega yega indasitiri yakasarudzika ine zvakafanana ne […]
Kushanda Kwenguva Yemberi
Hapana mubvunzo kuti vashandi venguva yemberi vanozove vanoshandira vashandi. Vashandi venguva yemberi vari kuzotarisa zvakasiyana zvachose kupfuura zvazviri nhasi. Aya akati wandei mafambiro ari kunongedzera kune shanduko dzinokanganisa ramangwana renzvimbo dzekushandira. Mubhuku rangu, "NextMapping - Fungidzira, Enda uye Gadzira Ramangwana […]
Iyo Yemberi Inoda Vatungamiriri NeMurume & Yechikadzi Hunhu
Ramangwana rinoda vatungamiriri vane hunhu hwechikadzi & hwechikadzi. Isu tiri panguva yakakosha uye nzvimbo munzvimbo. Mazuva ese tinoona mienzaniso yehukuru uye husina hukuru hutungamiriri nevarume nevakadzi, kungave mumakambani, kutanga kumusoro kana zvematongerwo enyika. Hutungamiriri hunhu munguva yakapfuura yanga iri yechirume mu […]
Vako Vanhu Vako Vanovimba Nevatungamiriri Vako here?
Ndine mubvunzo: Vanhu vako vanovimba nevatungamiriri vavo here? Kana iwe wapindura hongu - izvo zvakanaka kambani yako ramangwana rakagadzirira! Iko kune sainzi yakatsigirwa yekutsvagisa inoratidza kuti tsika yekuvimba ine yakakwira mwero yekubatanidzwa uye zvimwe zvakanaka. Paul J. Zak muongorori weHarvard akaongorora hukama huripo pakati pekuvimba, hutungamiriri uye […]
Nguva Yemberi Yebasa Inishuwarenzi 2025
Maindasitiri mazhinji anosanganisira inishuwarenzi ari kuchinjika nekukasira kune shanduko zhinji dzinokanganisa ramangwana renzvimbo yebasa inishuwarenzi 2025. AI, otomatiki, marobhoti, kuchinja maitiro evashandi kuri kukurumidza kukanganisa ramangwana reinishuwarenzi. Iko kudikanwa kwevatungamiriri kuve nehunyanzvi hwakagadziridzwa senge kugona kuve nemaonero akawanda. Vatungamiriri vanofanirwa kukwanisa kutungamira […]
Maitiro Ekuve Ramangwana Kugadzirira - Kubvunzana naAmber Mac
Cheryl Cran: Ndiri kufara chaizvo nhasi, kuve naAmber Mac semuenzi wedu. Amber ndokumbirawo ugovane nevatengi vedu kumashure kwako. Amber Mac: Maita basa, ndanga ndichishanda kwemakore angangoita makumi maviri ikozvino muindasitiri yehunyanzvi. Ini ndakatanga kupinda mumasora pane akati wandei matekiniki ekutanga muSan Francisco. Ndine utapi venhau […]
Maitiro eku Flexing Munguva dzeFlux
Wakazadzwa neshanduko huru? Joinha kirabhu! Isu tiri munguva iyo zvakakosha kuti isu tese tiite zvirinani pakudzidza maitiro ekuchinja munguva dzekuyerera. Tsananguro ye 'flex': Kufambisa kana kusimbisa Tsanangudzo ye 'flux': Izwi rinoreva 'shanduko' Iko kumhanya kweshanduko uye ruzivo rwatiri kubata […]
1 2 ... 74 Zvadaro>